Trump Oo Amray In La Baadho "Afgambi Lala Damcay Oo Dhicisoobay"
Thursday April 11, 2019 - 14:37:07 in News by Hadhwanaag News
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu la hadlay xeer ilaaliyaha guud ee dalka Maraykanka
Trump ayaa "isku day afgambi" ku tilmaamay baaritaankii uu ku sameeyay Robert Mueller oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee hay'adda dambibaarista Maraykanka ee FBI.
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Maraykanka William Barr ayaa isna sheegay in uu rumaysan yanay in dawladda Maraykanku ay si qarsoodi ah ula socotay ol'olihii Trump.
Sirdoonka Maraykanka ayaa horay u sheegay in ay u si qarsoodi ah dabagal ugu sameeyeen dad Ruush ah, balse aysan si qarsoodi ah u dabo galin ol'olihii doorashada ee Trump.
Madaxweynahan ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa isga oo saxafiyiinta kula hadlaya Aqalka Cad weeraray baaritaankii ay samaysay waaxda caddaaladda ee ku saabsanaa in ol'olihii Trump iyo Ruushka ay wada shaqayn dhex martay si uu ugu guulaysto doorashadii Maraykanka ee sannadkii 2016.
Trump ayaa yiri "Arrintaasi isku day afgambi ayay ahayd" tani waxay ahayd isku day xilka looga tuurayay madaxweyne. Waana ka guulaysannay, waanaga ka guulaysannay.
"Warbixinta Mueller, marka ay ka hadashay in caddaaladda la carqaladaynayo waan ka dagaalannay. Ma garanaysaa sababta aan uga dhiidhinay?
"Sababtoo ah waxaan ogaa sida waxan oo dhan ay sharci darro u yihiin. Khayaano ayay ahayd.
"Waxa aan hadda xiisaynayo ayaa ah in dib loo billaabo, sidaas ayaana ka rajaynayaa Xeer Ilaaliyaha Guud. Shalayna wuu soo hadal qaaday.
"Shaqo wanaagsan ayuu hayaa, wuxuuna billaabayaa in uu dib ugu laabto halka arrintani ay ka soo farcantay.
Donald Trump ayaa wakhti dheer ku baaqayay in baaritaan lagu sameeyo baareyaasha dib u eegista ku samaynayay sida uu u dhacay ol'olihii doorashada. Hadda isaga oo gacan ka helaya Xeer Ilaaliyaha Guud ee uu dhawaan magacaabay, waxaa u rumoobi doonta riyadiisii.